Kuzey Irak demiryolu projesi hazır - RayHaber
[30 / 09 / 2019] ကြောက်စရာမှ Related Bilecik စွပ်စွဲချက်အတွက်မီးရထားမတော်တဆမှု!	11 Bilecik
[30 / 09 / 2019] တရုတ်နိုင်ငံတွင်တစ်ခုမှာအချိန်အတွက် Completed အရှည်ဆုံးရထားန်ဆောင်မှုများ Input	86 တရုတ်
[30 / 09 / 2019] ဂျီဒဟ်ရထားဘူတာမှာမီး	966 ဆော်ဒီအာရေဗျ
[30 / 09 / 2019] ဓါတ်ရထားမြေပုံ Konya Konya ဓါတ်ရထားနာရီ, ဘူတာရုံအမည်များနှင့်ကြေးဇယား	42 Konya
HomeလောကASIA မှ965 အီရတ်မြောက်ပိုင်းအီရတ်ရထားလမ်းစီမံကိန်းအားအဆင်သင့်
06 / 05 / 2013 Levent Ozen 965 အီရတ်, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
"ဒီကိုသာမီးရထားလမ်း၏လွတ်လပ်ဖြစ်နိုင်သည်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးSüleyman Karaman, ကမ္ဘာကြီးကိုကျနော်တို့ကဆိုပါတယ်သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတစ်ဦးဝေစုရရှိရန် xnumx'y 2020 ထရီလီယံဒေါ်လာသည်အထိကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုလည်းယခုလက်၌ဤအလုပ်ကိုယူရမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစတင်မည်ရထားလမ်းတီထွင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခု မှစ. ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးဝေစုရပါလိမ့်မယ်။ အရှေ့နဲ့အနောက်အကြားကုန်တင်ကုန်ကျစရိတ် 1 ဒေါ်လာဘီလျံချဉ်းကပ်နေကြသည်။ 75 ကျနော်တို့ကရထားလမ်းဖယ်ရှားပစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်။ "
မြောက်ပိုင်းအီရတ် Zakho, Arbil နှင့်သူတို့ဘဂ္ဂဒက် Karaman ပါရှိသည်အသစ်တစ်ခုမီးရထားလမ်းဝရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုညွှန်ပြ, "မြောက်ပိုင်းအီရတ်, စီမံကိန်းအဆင်သင့်ဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့ကခွင့်ပြုချက်ဖြစ်စဉ်ကိုမျှော်မှန်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်စည်ဘဆ်ွရာမှဥရောပတိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ Karaman, အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးအထိသုံးလကပြောပါတယ်။ သငျသညျ Karaman, "ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဆီးရီးယားကနေတဆင့်သွားနိုင်သည်ကိုသတိပွုမိမြောက်ပိုင်းအီရတ်ကနေတူရကီဖို့တိုက်ရိုက်လိုင်းရှိသည်။ ငွေ့ရည်ဖွဲ့လျှင်ဒီလိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကဒီသဘောတူညီချက်ဝဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအခါကုန်ပစ္စည်းများဥရောပမှဘဆ်ွရာမှတိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ Nusaybin လွှဲပြောင်းစင်တာကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
အီရတ်နှင့် Nakhichevan, ခွင့်ပြုတူရကီကနေတဆင့်ရထားလမ်းနှင့်ကားလမ်းအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖို့လိုအပ်တဲ့လောင်စာ၏ output 14 / 06 / 2012 အီရတ်တူရကီမှတဆင့်လမ်းသို့မဟုတ်ရထားလမ်းအားဖြင့်ပို့ဆောင်ခံရဖို့ဓာတ်ဆီ, ဒီဇယ်နှင့်ဂျက်လောင်စာလိုအပ်ပါတယ်ရာ Nakhichevan ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသမ္မတနိုင်ငံ, နှစ်ပေါင်း3ခွင့်ပြုခဲ့သောဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်နှင့်အတူလိုအပ်နေပါသည်။ ဘာသာရပ်အပေါ်ဝန်ကြီးများကောင်စီ, '' တူရကီရေနံစိမ်း, ဂျက်ဆီနှင့်တရားဝင်ပြန်တမ်း entry ကိုထုတ်ဝေရထားအားဖြင့် Carriage ပတ်သက်သောလမ်းသို့မဟုတ် resolution ကိုပြင်ဆင်ရေး, ရက်တွင်အမိန့်များထဲက။ အီရတ်မှအကူးအပြောင်းအတွက်ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်လောင်စာလိုအပ်ပါတယ်သောကဆိုပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ပါရှိသောယာယီပစ္စည်းဥစ္စာ, အဆိုအရယနေ့ထံမှ3နှစ်ပေါင်းကာလအဘို့ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Nakhichevan ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသမ္မတနိုင်ငံဓာတ်ဆီ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, ဒီဇယ်နှင့် ...
အီရတ်မှပို့ကုန်တိုးမြှင့်မီးရထား Habur မှတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ် 16 / 06 / 2012 အဆိုပါအရှေ့တောင် Anatolia စီမံကိန်းရဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအရေးယူမှုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရထားလမ်းကွန်ရက် Habur နယ်စပ်ရေးရာဂိတ်သည်အထိတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, အီရတ်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုပမာဏတူရကီရဲ့ဒုတိယအကြီးမားဆုံးပို့ကုန်နောက်ထပ်တံခါးကိုတိုးမြှင့်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာန, ဒီပြဿနာအပေါ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အရာတူရကီရဲ့ပို့ကုန်အီရတ်နှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့အသစ်တခုခြေလှမ်းယူလျက်ရှိသည်အတွက်ဒုတိယအဆင့်။ ပြဿနာကိုတင်သွင်းခဲ့ပါသည်သည်အထိ Habur အမျိုးသားရေးရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ အရှေ့တောင် Anatolia စီမံကိန်း (GAP) Action Plan ရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန, ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်းအတာအတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ ...
အဆိုပါတူရကီ-အီရတ်တိုက်ရိုက်ရထားလမ်းများအတွက်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည် 12 / 09 / 2012 အီရတ်နှင့်တူရကီအကြားတိုက်ရိုက်ရထားလမ်းများအတွက် 1 ။ ကျွမ်းကျင်သူများကအစည်းအဝေးတူရကီပြည်နယ်မီးရထား 03-04 စက်တင်ဘာလ 2012 နေ့စွဲ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအစည်းအဝေး, TCDD ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ismet Duman သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်။ အစည်းအဝေး; နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန, အကောက်ခွန်နှင့်ကုန်သွယ်ရေး, ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ရေကြောင်းရေးရာနှင့် TCDD ပြင်ပဆက်ဆံရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအထွေထွေဝန်ကြီးဌာနနှင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, လုံခြုံရေးပြည်ထဲရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာနအဘို့အီးယူညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအပေါ်မူတည် '' မြေပုံအီရတ်မီးရထား, တူရကီအတွက်အီရတ်သံရုံး, အီရတ် CZ-ကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံနှင့်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေစစ်ဌာနချုပ်၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အီရတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပူးတွဲပါ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ 23 1978 တူရကီ-ဆီးရီးယား-အီရတ်မီးရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 23 / 10 / 2012 အောက်တိုဘာလ 23 1978 တူရကီ-ဆီးရီးယား-အီရတ်မီးရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ 23 1901 Deutsche Bank မှ CEO ဖြစ်သူဂျော့ခ်ျဗွန် Siemens အနိစ္စရောက်လေ၏။ Anatolia-ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားစီမံကိန်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခဲ့သည်။
အီရတ်ရေနံရထားလမ်းအားဖြင့်ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မည် 01 / 03 / 2013 အီရတ်ရေနံရထားလမ်းအားဖြင့်ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးTÜPRAŞမီးရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတူရကီအတွက်တော်လှန်ရေးစီမံကိနျးအတှကျတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း။ Tüpraşİzmitရုံမြားတှငျရထားလမ်းအသုံးပြုပုံသူတို့ကအဓိကစီမံကိန်းတစ်ခုမီးရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလီမိတက်ကုမ္ပဏီအထွေထွေမန်နေဂျာများအတွက်ပြင်ဆင်မှုနှင့် TCDD ရွေ့လျားမှုအတွက် Flat သမ္မတဟောင်း Suleyman Yavuz, စီမံကိန်းပို့ဆောင်ခံရဖို့လောင်စာပမာဏကိုညွှန်ပြ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလောင်စာမှသိသိသာသာအလှူငွေပေးသွားမှာပါန်ဆောင်မှုများနှစ်ပေါင်းများစွာပူဇော် ပေးသောသူ2630 တန်ချိန်သန်းမှထမြောက်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ "စီးပွားရေးန်ဆောင်မှုများအဘို့, quick လုံခြုံပြီးတိကျမှုလိပ်စာဝေးအောင်မြင်မှုနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးအစီအစဉ်များ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုကျော်လွန်ပြီး, 2005 ဆောင်ပုဒ်မီးရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ ...
အီရတ်နှင့် Nakhichevan, ခွင့်ပြုတူရကီကနေတဆင့်ရထားလမ်းနှင့်ကားလမ်းအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖို့လိုအပ်တဲ့လောင်စာ၏ output
အီရတ်မှပို့ကုန်တိုးမြှင့်မီးရထား Habur မှတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ 23 1978 တူရကီ-ဆီးရီးယား-အီရတ်မီးရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 23 1978 တူရကီ-ဆီးရီးယား-အီရတ်မီးရထားလမ်းဖွင့်လှစ်
အဆိုပါ Samsun-အီရတ်ရထားလမ်းအဆိုပြုချက်ကို Canikli သမ္မတ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (544) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)